Hanomboka rahampitso izany fifaninanana izany, izay handraisan’ireo ekipa 24 avy amin’ireo ligim-paritra 22, ka Itasy sy Analamanga no manana solon-tena roa avy. Ao anatin’ny folo andro (16 septambra – 25 septambra) no hamitàna izany.
Nozaraina ho vondrona efatra, arakaraka ny toerana misy ny faritra eto Madagasikara, izy ireo, ankoatra ny ekipan’ Analamanga faharoa. Ireto farany dia noho ny Cnaps Sport voahositra ho tompon-dakan’i Madagasikara farany sy AS Adema tompon’ny amboara no nahazoan’izy ireo toerana roa avy.
Ekipa roa avy isaky ny vondrona no miakatra ho eo amin’ny dingana faharoa amin’ity fifaninanana ity. Ao aorian’io vao ho fantatra ireo ekipa efatra hiatrika ny « poule des AS », izay hatao lalao mandroso sy miverina any Mahajanga sy Antananarivo.